तपाइले यी कुरा जान्नुहोस धनलाभ हुने छ वास्तुशास्त्रका अनुसार,घरको कुन दिशामा सुत्नु हुन्छ कुन दिशा सुत्नुहुँदैन? - SudurSanchar
वास्तुशास्त्रका अनुसार घरका सबै दिशाहरु महत्वपूर्ण मानिन्छ। पश्चिम एवं उत्तरको बीच स्थित उत्तर-पश्चिम दिशालाई वायव्य कोण भनिन्छ। उत्तर-पश्चिम दिशाले हामीलाई दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान गर्दछ। यो दिशा व्यवहारमा परिवर्तनको सूचक हो।यदि उत्तर-पश्चिम दिशा खराब भएमा मित्र शत्रु बन्छन्। यसको साथै उर्जा समाप्त हुन्छ। आयु क्षीण हुन्छ। जातकको राम्रो व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ र घमण्डको मात्रा पनि बढ्छ।यदि तपाईको घरमा नोकर छन् भने उसको कोठा उत्तर-पश्चिममा हुनुपर्छ।घरको वायव्य कोणमा विवाहित महिला सुत्नुहुँदैन। यस दिशामा सुत्दा उनले अलग घर बसाउने सपना देख्न लाग्छन्।त्यस्तै उत्तर-पश्चिम दिशामा कुमारी कन्या सुत्नुहुँदैन। त्यसले विवाहको योग मजबूत हुन्छ।शौचालयको लागि वायव्य कोण या दक्षिण दिशाको बीचको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ। शौचालयमा प्यान यसरी राख्नुहोस् कि दिशा गर्दा तपाईकोमुख दक्षिण या उत्तर तर्फ फर्किओस्।
बच्चाको पढाईको लागि तिनको स्टडी टेबल, चेयर आदि उत्तर या उत्तर वायव्य कोणमै राख्नु पर्दछ। जबकी किताबको र्याक पश्चिम या दक्षिण दिशामा राख्नु शुभ हुन्छ।टेबल ल्याम सधैँ टेबलको दक्षिण-पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ।उत्तर-पश्चिम दिशामा दोषको लागि एक सानो एक्वारियम स्थापित गर्नुपर्छ। जसमा आठ सुनौला माछा वा एक कालो माछा राख्नुहोस्।बल ल्याम सधैँ टेबलको दक्षिण-पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ।उत्तर-पश्चिम दिशामा दोषको लागि एक सानो एक्वारियम स्थापित गर्नुपर्छ। जसमा आठ सुनौला माछा वा एक कालो माछा राख्नुहोस्।बल ल्याम सधैँ टेबलको दक्षिण-पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ।उत्तर-पश्चिम दिशामा दोषको लागि एक सानो एक्वारियम स्थापित गर्नुपर्छ। जसमा आठ सुनौला माछा वा एक कालो माछा राख्नुहोस्।
यो पनि :यो संसार धेरै रहस्यमयी चिजहरु छन् । केही पत्ता लागेका छन् केही बाँकी । सुन्दा र देख्दा नै अचम्म लाग्ने घटनाले मानिसहरुलाई चकित तुल्याउँछ । यस्तै एउटा अचम्को झरना छ जहाँ आगो निरन्तर बलिरहन्छ । एउटा रहस्य यमय ढुङ्गाको माथि बाट लगातार झरना बगिरहन्छ तै पनि झरनाको ठिक तल कयौँ वर्ष षदेखि आगो बलिरहेको छ ।यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा पर्छ । जसलाई आजभोलि एटरनल फ्लेम भनिन्छ । यो झरनाको विशेषता भनेको यहाँ वर्ष भरि पानी बगिरहन्छ र यसको ठ्याक्कै तल आगो बलिरहन्छ । स्थानीयहरुले यसलाई दैवी चमत्कार मान्छन् ।
उनीहरुको मान्यता के छ भने यो आगो उतिखेर निभ्ने छ जब धर्तिमा महाप्रलय आउनेछ ।यो आगोलाई हेर्न मानिसहरु टाढा टाढाबाट आउने गर्छन् । यो आगोको बारेमा भारतको एउटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले एक अनुसन्धान पनि गरेको छ ।खोजपछि वैज्ञानिकहरुले ढुङ्गाको भित्रिबाट मिथेन ग्यास निस्कने दावी गरेका छन्।सोही कारण आगो निरन्तर बलेको हुनुपर्छ ।
यो पनि -महिलाका यी ७ र’हस्यहरु , जानकारीका लागि पुरा पद्नुस !=एजेन्सी, पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अ’स्ति’त्वबिना अर्को सम्भव छँदै छैन । त्यसकारण महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । कहिले काँहि पुरुषहरु महिलाको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको ठानेर भ्रममा समेत पर्ने गर्छन् । किन कि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन महिलाले पुरुषलाई थाहै दिँदैनन् ।
महिलाका ७ रहस्यहरु:=१.एक महिला अर्की महिलासँग प्रेम गर्छे महिला पुरुषसँग मात्र आ’कर्षित हुन्छे भन्ने ठान्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा एक महिला अर्की महिलाको दुश्मन ठानिएपनि महिलाले महिलालाई एकदम प्रेम समेत गर्छन । कतिपय महिलालाई आ’कर्षक बनेर हिँड्ने महिलालाई बारम्बार देख्न मन समेत लाग्ने गर्छ ।२. पूर्व प्रेमीको निगरानी केटीहरुले विवाह भएपछि वा नयाँ प्रेम सम्बन्ध शुरु भएपछि पनि पहिलो प्रेमीलाई विर्सन सक्दैनन् । उनीहरुले पूर्व प्रेमिका गतिविधी नियालीरहेका हुन्छ्न् । उ कहाँ जान्छ । कोसँग भेट्छ वा कस्ता फेसबुक अपडेट राख्छ भन्ने कुरा केटीहरुले विचार गर्छन् ।
३. अ’श्लिल चलचित्र हेर्न महिलालाई पनि मन पर्छ अ’श्लिल चलचित्रका पारखी पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने सोंच्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा केटीहरु पनि अ’श्लिल चलचित्र हेर्न मन पराउँछन् । तर उनीहरुले यस्तो चलचित्र हेरेको कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार भने गर्दैनन्।४. आफ्नै शरीरसँग प्रेम हरेक महिलालाई सबैभन्दा बढी प्रेम आफ्नै शरीरसँग हुन्छ । खासमा शरीरको विषयमा पुरुषले गर्ने न’कारात्मक टिप्पणीले कुनै पनि केटीको सबैभन्दा बढी चित्त दुख्छ ।
५. एक्लै हुँदा महिलाहरु एक्लै हुँदा अनेक हर्कत गर्छन् जुन अरु भएको बेला गर्न मिल्दैन । तर यो कुरा उनीहरुले अरुसँग भन्न मन पराउँदैनन् । ब्रा लगाएर नाच्नु वा विभिन्न पोज दिएर ऐना हेर्नु जस्ता क्रियाकलाप केटीहरुले एक्लै भएको बेला गर्छन् ।६. इर्श्या कुनै पनि महिलाको लागि प्राकृतिक गुण नै हो भन्दा पनि हुन्छ । विवाह गरेपछि हतारमा आमा बन्न नचाहने केटी अरुका सन्तान देखेर भने इर्श्या गर्छन् । आफूलाई महिलाका स’मस्याका कारण दुखाइ वा पीडा हुँदा पतिलाई पनि त्यस्तै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो उनीहरुलाई लाग्छ ।७. रहस्य जान्ने इच्छा हरेक महिलालाई आफ्ना पुरुष साथी वा पतिप्रति केही न केही कुरा लुकाएको संका हुन्छ । उनीहरु त्यो कुरा जान्न चाहिरहेका हुन्छन् ।
यो पनि :आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोचका मालिक हुन्छन् र निकै विश्वसनीय हुन्छन् ।२. तपाईंहरु अन्र्तमुखी हुने भएका कारण थोरै साथीहरु हुन्छन् ३. निकै संवेदनशील हुने भएका कारण तपाईंहरु कसैले भनेको कुरालाई धेरै दिनसम्म मनमा लिइ रहनु हुन्छ ।. तपाईंहरुमा चिन्तन शक्ति निकै धेरै हुने भएका कारण लेखन अथवा वकालतको क्षेत्रमा हुनुहुनेछ ।५. तपाईंहरु अरुलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर त हुनुहुन्छ नै तर तपाईंको चाँडै रिसाउने बानीले तपाईंले सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु तपाईंसँग रिसाउने गर्दछन् ।